आजको राशिफल, कुन राशि भएकालाई कति शुभ ? - Everest Dainik - News from Nepal
२०७७ जेठ १८ गते आइतबारको राशिफल ।
आज अग्रज र विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग मिल्ला । पारिवारिक जमघटमा सहभागी भईएला । अचल सम्पत्तिको कारोवार हुनेछ ।
धनार्जनका नयाँ स्रोतहरूपत्ता लाग्नेछन् । आफन्त र बन्धु–बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । प्रेमका कोपिलाहरु पक्रिएर जानेछन् ।
कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । नजिकको व्यक्तिबाट कार्य पुरा हुनेछ । प्रतिष्ठित व्यक्त्तीको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज मंसिर ९ सोमवार कस्तो छ तपाइँको दिन? हेर्नुस् राशिफल
पुनर्मिलनको योग रहेको छ । बिश्वास गरेकाले साथ दिनेछन् । व्यापार व्यबसायबाट आम्दानी हुनेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ ।
आज मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउला । मुद्दा मामिलामा विजयी प्राप्त हुनेछ । सवारी साधनको खरिद बिक्री हुनेछ ।
शरीर भारि र मन अस्थिर रहने संकेत देखिन्छ । बैदेशिक क्षेत्र कमजोर नै हला । चुनौतीको सामना र काममा समस्या आउला ।
याे पनि पढ्नुस आज - ०५ भाद्र २०७६ बिहिवारको राशिफल
पारिवारिक भेटघाट हुनुका साथै इष्टमित्रहरूसंग पनि मेलमिलाप हुनेछ । शिक्षिक क्षेत्रमा राम्रै हुनेछ । प्रेममापनि सफलता पाईनेछ ।
प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । आयआर्जनका क्षेत्रमा सुधार आउनेछ । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ ।
कुनै महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी आइलाग्नसक्छ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज सोमबार, कस्तो छ तपाइको राशिफल?
प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईंको खुट्टा तान्ने प्रयास गर्नसक्छन् । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउनेछ । पेट सम्बधी समस्याका आउन सक्छ ।
आज कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । शुभ र नयाँ योजना बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा विस्तारै प्रगति हुँदै जानेछ ।
आज नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । प्रशासनिक र न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साँझमा पैसा खर्च बढ्न सक्छ ।